Kwidza | Law & More | Eindhoven & Amsterdam
Zvakajairika kuti mumwe kana vaviri mapato asabvumirana nemutongo wavo. Iwe haupikisane nemutongo wedare here? Ipapo pane sarudzo yekukwirira kudare uku kudare redzimhosva. Nekudaro, sarudzo iyi haishande pazvinhu zvevagari vane mari yemari inofarira isingasviki EUR 1,750. Iwe unobvuma kubvumirana nedare redzimhosva? Ipapo iwe unogona kuramba uchibatanidzwa mukutongwa kudare. Mushure mezvose, mumwe wako waanopokana naye angasarudzawo kukwezva.
Chirevo chekunyunyuta chinotevera chirevo chekudzivirira. Kana iri yayo, anopomerwa pakukwikwidza angaisawo zvikonzero pamberi pechibvumirano chakakwikwidzwa uye apindura chirevo chemhan'ari. Chirevo chekunyunyuta uye chirevo chekudzivirira chinowanzogumisa kuchinjana kwenzvimbo pakukwirira. Mushure mekunge magwaro akanyorwa atsinhaniswa, hazvibvumidzwe kuisa mberi nzvimbo nyowani, kunyangwe kuitira kuti ukure. Izvo zvinotsanangurwa kuti mutongi haakwanise kutarisisa kune zvikonzero zvekukwirira zvakaiswa pamberi mushure mekutaura kwekukwirira kana kudzivirira. Izvo zvakafanana zvinoshanda pakuwedzera kwekubvunzwa. Nekudaro, nenzira yekusarongeka, pasi richiri kuenderana nenguva inotevera kana mumwe wacho akapa mvumo, chikumbiro chinomuka kubva mugakava rekupokana kana mamiriro ezvinhu mutsva amuka mushure mekunge magwaro akanyorwa aiswa.
Nhanho yekupedzisira pamatare edzimhosva mukukwirira ndeayo mutongo. Mumutongo uyu, dare rekukwirira richaratidza kuti mutongo wakapihwa wedare wanga wakanaka. Mukuita, zvinogona kutora kusvika pamwedzi mitanhatu kana kupfuura kuti mapato atarisana nemutongo wekupedzisira wedare rekukwirira. Kana zvikonzero zvemubatiri zvikasimbiswa, dare rinofanira kuisa parutivi mutongo wakakwikwidzwa uye rinogadzirisa nyaya yacho pachayo. Zvikasadaro dare rekukwirira richasimudzira zvine mutsindo mutambi akakwikwidzwa.
Kazhinji, mapato anoteedzera mutongo wedare rekukwirira uye nyaya yavo saka inogadziriswa pakukwirira. Nekudaro, haubvumirani nemutongo wedare mukukwirira? Ikozve pane sarudzo yekuisa cassation kuDutch Supreme Court kusvika kumwedzi mitatu mushure mekutonga kwedare rekukwirira. Iyi sarudzo haishande kune sarudzo dzeABRvS, CRvB uye CBb. Mushure mezvose, zvirevo zvemiviri iyi zvine kutonga kwekupedzisira. Saka hazvigoneke kupokana kutonga uku.